Oday 60-jir ah oo Caawa lagu dilay Magaalada Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Wararka naga soo gaaraya Degmada Dharkeynley ee Galbeedka Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Kooxo Hubeysan ay dil u geysteen Oday 60-Sano Jir ahaa.
Dilka oo loo geystay Marxuum lagu Magacaabi jiray Xasan Sulub ayaa ka dhacay Nawaaxiga Masaajidka Dabaqeynka ee Degmada Dharkeynley, Dabley hubeysan oo bistoolado wadato ayaa dishay Marxuumka kuwaasoo markii danbe meesha isaga baxsaday.
Ninka la dilay oo kaaba Marqaati ahaa, ayaa ka shaqeysan jiray Suuqa Beerta ee Degmada Waaberi, balse Maqribnimadii Caawa ayaa waxaa rasaas la dhacay dhalinyaro Hubeysan.
Ciidamada Maamulka Dharkeynley oo maqlay dhawaqa Rasaasta lagu dilay Xasan Sulub ayaa durbadiiba ku baxay goobta uu dilka ka dhacay, Waxeyna sameeyeen Baaritaano iyagoo horay usoo qaaday Meydka Marxuumka oo rasaasta ay kaga taalay Madaxa iyo Wadnaha.
Magaalada Muqdisho waxaa mudooyinkan Joogto ka noqday dilalka ay geysanayaan Kooxo Bistoolado ku heysan, iyagoona dilka kadib baxsada.
Xalay waxaa lagu dilay Xaafada Taleex ee Degmada Hodan mid kamid ahaa Shaqaalaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Habeenkii ka horeeyay, waxaa lagu dilay Masaajidka C/raxmaan Bin Cowf ee Degmada Waaberi Oday da’ ahaa oo lagu Magacaabi jiray Ow Aadan kaa soo sarifle ka ahaa Isgoyska Dabka, sidoo kale isla Maalinkaas Wadajir waxaa lagu dilay Sarkaal katirsanaa Milatariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa Bangraft ay gacanta ku hayaan oo lagu Magacaabi jiray Cali Raage.